पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कमल थापाको संवाद : अब सक्रिय हुनुपर्‍यो, बेला भयो र ? Canada Nepal
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कमल थापाको संवाद : अब सक्रिय हुनुपर्‍यो, बेला भयो र ?
पौष ३ २०७७
काठमाडौं पछिल्ला केही महिनायता राजसंस्था पुनर्स्थापनासहितका एजेण्डा बोकेर प्रदर्शन भइरहेको छ । विभिन्न संघ संगठनको नेतृत्वमा भइरहेको राजावादीहरुको प्रदर्शन स्वतःस्फूर्त रहेको राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले दाबी गरेका छन् ।
विदेशी शक्ति र निर्मल निवासको सहयोगमा प्रदर्शन भएको भन्ने हल्लाको खण्डन गर्दै उनले अहिले भइरहेका राजतन्त्र पुनर्स्थापनासहितको आन्दोलन स्वतःस्फूर्त रहेको दाबी गरेका हुन् ।
राजावादीको आन्दोलनले गणतन्त्रको जग हल्लाएको हो ?
इमेज च्यानलमा बिहीबार जगदिश खरेलसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष थापाले एकआपसमा आर्थिक संकलन गरेर आन्दोलन भइरहेको आफूले जानकारी पाएको बताए । आर्थिक अभावले गर्दा फाट्टफुट्ट आन्दोलन भएको भन्दै उनले आर्थिक अभाव नहुने हो भने राजावादीहरुको आन्दोलन दैनिक हुने बताए ।
विदेशको सहयोगमा हुने परिवर्तनले स्थायित्व नपाउने भन्दै उनले राजावादीहरुको आन्दोलनमा बाह्य मुलुकको सहयोग अस्वीकार्य रहेको बताए । ‘आन्दोलनप्रति विदेशीको सद्भाव रहन सक्छ’, उनले भने, ‘तर, विदेशीको सहयोगमा हुने परिवर्तन स्थिर हुँदैन ।’
उनले राजसंस्थाको आवश्यकताको मूल तीन कारण प्रस्तुत गरे । जसमा विदेशीको एजेण्डामा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता ल्याइएको रहस्योद्घाट हुनु, पछिल्लो १२/१३ वर्षमा परिवर्तनको संवाहक भनिएका दल र तिनका नेताहरुले दिएको आश्वासन पूरा गर्न नसक्दा जनतामा वितृष्णा बढ्नु र १३/१४ वर्षयता आफूविरुद्ध गतिविधि भइरहँदा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले शालिन र मर्यादा कायम गरेकाले नवराजाभन्दा वास्तविक राजा नै सही भन्ने जनतामा परेको उल्लेख गरे ।
विदेशीको हस्तक्षेप र सेनाले शक्ति प्रयोग गरेर राजसंस्था पुनर्स्थापना नहुने र यसरी हुने पुनर्स्थपना दिगो नहुने भन्दै अध्यक्ष थापाले जनताले नै राजसंस्था स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
किशोर गणतन्त्रमै घन्कियो नारा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’
पछिल्लो समय भइरहेको राजावादीहरुको प्रदर्शन, ती प्रदर्शनको राप्रपाले नेतृत्व लिन नसकेको विषय उठाउँदै पत्रकार जगदीश खरेलले राखेको जिज्ञासामा अध्यक्ष थापाले राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न ज्ञानेन्द्र नै सक्रिय हुनुपर्ने बताए । यसको मतलब राजनीतिक दलहरुको सम्बन्धलाई नजिक्याउँदै र उनीहरुमार्फत नै राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नु रहेको उनको स्पष्टोक्ति छ ।
अहिले भइरहेका आन्दोलनमा निर्मल निवासको कुनै पनि भूमिका नरहेको बताएका अध्यक्ष थापाले आफूले भेट हुँदा ज्ञानेन्द्रलाई राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि सक्रिय हुन सुझाव दिएको बताए । जवाफमा ज्ञानेन्द्रले बेला भयो र ? भन्ने प्रश्न गरेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । बितेको १४ वर्षमा राजसंस्था पुनर्स्थापना आवश्यकता रहेको जनतामा महसुस भइरहेको भन्दै उनले यसका लागि सबैको साथ र सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
दोस्रो जनआन्दोलनमा विदेशीको ८० करोड लगानी
विक्रम संवत् २००७, २०४६, २०६२/०६३का आन्दोलनसहित त्यसयता भइरहेका राजनीतिक परिवर्तनमा विदेशीको ठूलो नैतिक र आर्थिक सहयोग रहेको राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको दाबी छ । २०६२/०६३को आन्दोलनमा पनि विदेशीले ८० करोड लगानी गरेको आफूले सूचनासहित संवादको अडिओ फेला पारेको तत्कालीन गृहमन्त्रीसमेत रहेका थापाको दाबी छ ।
ओली, प्रचण्ड र देउवाको अकर्मण्यताले राजतन्त्रको आवाज बलियो बन्दै
तत्कालीन माओवादीलाई दिएको पैसा आन्दोलनमा खर्चे भएको, तर कांग्रेसलाई दिएको पैसा खर्च नभएको भन्दै तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भएको विदेशीको संवादको अडिओ आफूले पाएको उनको भनाइ छ । यद्यपि अहिले सो अडिओ रहे नरहेको थाहा नभएको उनले बताए ।
पौष ३, २०७७ शुक्रवार १५:३१:०९ बजे : प्रकाशित
# पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह